Mashruuca Quudinta ee Apollo Beach, FL ilaa Deepen kanaalka & Balaarinta Xeebta
Diyaar garow loogu jiro Apollo Beach Dredging
Gator Dredging, oo ah qandaraasle fadhigiisu fadhigiisu yahay Florida, ayaa howlo burburin ah dhamaadka bishaan ka bilaabi doona Apollo Beach, Florida.
Nidaamkan qashin-qubka ayaa ka bilaabmi doona Waqooyiga Channel ka dibna wuxuu usii gudbi doonaa kanaalada Koonfurta iyo Main Pass bisha May.
Barnaamijka qulqulaya Apollo Beach ayaa la dhammeystiri doonaa dhamaadka bisha Maajo, isagoo xayiraya cimilo xumi ama qaladaadka qalabka.
Marka shaqada la qabto, saddax kanaal oo aagga u socda ayaa ka socon doona qiyaastii illaa 90 cagaha cagaha qoto dheer ilaa dhererkoodu yahay 4 / 71 cagaha qoto dheer oo hooseeya, furitaanka marin u helidda doonyaha shiraaca iyo doonyaha dheereeya oo hadda ay tahay inay sugaan kacsi sare si ay u galaan iyo bannaanka.
Hawlgallada qallafsanaanta ayaa dhici doona maalmaha shaqada ee usbuuca.
Ka sokow shaqada duugta ah, mashruucu wuxuu beddeli doonaa qulqulka xeebta burburay ee 60-acre Apollo Beach Nature Preserve.